မောင်သက်နိုင်: လွတ်လပ်ခွင့်၊ မီဒီယာ၊ သတင်းနှင့် ပြည်သူ့ဖျော်ဖြေမှုကဏ္ဍ
လွတ်လပ်ခွင့်၊ မီဒီယာ၊ သတင်းနှင့် ပြည်သူ့ဖျော်ဖြေမှုကဏ္ဍ
12:26 AM သတင်း No comments
ယခုတစ်လော သတင်းစာ၊ဂျာနယ်၊ရုပ်သံလိုင်းများနှင့် အခြားပြည်သူ့ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍများတွင် လွတ်လပ်ခွင့်ကို ကိုယ်ပိုင်အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များဖြင့် သဘောတရားအမှားများပြုလုပ်နေကြောင်း ပြည်သူများက ထောက်ပြလိုက်သည်။ အချို့သောဂျာနယ်များတွင်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အတူ ပြည်သူ့ဘက်ကရပ်တည်သောသတင်းများကို ရေးသားဖော်ပြမှုများပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ ကြသော်လည်း ဂျာနယ်တော်တော်များများတွင်မူ လွတ်လပ်ခွင့်ကို အကြောင်းပြုပြီး မိမိတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကျိုးအမြတ် ရရှိမှုကိုသာ ဦးတည်ရေးသားဖော်ပြနေခြင်းများလည်းရှိကြောင်း ပြည်သူအချို့ကထောက်ပြဝေဖန်လိုက်သည်။
အငြိမ်းစားကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးကံညွန့်က “လွတ်လပ်ခွင့်ကို တစ်ချို့ကဘယ်လို ဖွင့်ဆိုသလဲတော့မသိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တွေ့နေရတဲ့ အနုပညာဂျာနယ်အချို့မှာတော့ ၀တ်စား ဆင်ယင်မှုကို လွတ်လပ်ခွင့်အနေနဲ့ အသုံးချနေတာတွေ့ရတယ်။
သူတို့ဂျာနယ်စောင်ရေလွတ်လပ်တာလားလွတ်ထွက်နေတာလားဆိုတာစာဖတ်သူတွေကိုယ်တိုင်သိကြပါတယ်။ ပြီးတော့အားကစားသတင်းဂျာနယ်တွေမှာ နောက်ပိုင်းပါလာတဲ့ ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်တွေမှာ လောင်းကစားဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းတွေထည့်သုံးလာတာတွေ့ရတယ်။ ဒီတော့ ဒီဂျာနယ်တွေက အားကစားအားပေးမှာလား? လောင်းကစားအားပေးမှာလား? စဉ်းစားစရာပဲ” ဟု သူ့ရဲ့အမြင်ကို ပြောပြသွားပါတယ်။
နေ့စဉ်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များအားကြည့်ရှုသူအဘွားအိုတစ်ဦးက“တစ်ချို့အစီအစဉ်တွေကတော့ကောင်းပါတယ်၊ ဆွေးနွေးခန်းတို့ ဘာတို့ပေါ့။ ပြီးတော့ ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ တရားခွေလေးတွေလွှင့်ပေးတာကောင်းပါတယ်။ ညပိုင်းအစီအစဉ်တွေမှာတော့ လူငယ်ကြိုက်တွေများတယ်။ လူငယ်တွေကပြောတော့ တိုးတက်တယ်တိုးတက်တယ်နဲ့ အဘွားမြင်တာတော့ မိန်းကလေးတွေဝတ်တာ တိုတက်လာတာပဲတွေ့တယ်၊ ယဉ်ကျေးမှုအတွက် စိုးရိမ်စရာပဲ” ဟု ဝေဖန်သွားပါတယ်။ ကိုမျိုးညီညီကဝေဖန်ပြောဆိုရာမှာ” ယခင်ဝန်ကြီးဦး ကျော်ဆန်းနဲ့ အခု ဦးအောင်ကြည်အပြောင်းအလဲမှာ ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့၊ ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ ကြေငြာကို သွားတွေ့မိတယ်။ ပြီးတော့ တီဗီအစီအစဉ်တွေကြေငြာတဲ့ Presenter အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘောင်းဘီတိုတိုကပ်ကပ်တွေ တွေ့လာရတယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီတီဗီအစီအစဉ်တွေရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကိုမေးချင်တယ် “ဒါမီဒီယာပြောင်းလဲမှုလား”လို့၊ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်နေတာက မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ အတူ လက်ရှိအစိုးရရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို အပြုသဘော ထောက်ပြဝေ ဖန်နိုင်တဲ့ အစီအစဉ်မျိုးတွေ၊ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ လူငယ်ပိုင်း အမေးအဖြေကဏ္ဍတွေ စတဲ့ အရင်ကမရှိခဲ့တဲ့ အစီအစဉ်မျိုးတွေကို ထုတ်လွှင့်စေချင်တာ။
အခုတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ လူငယ်တွေကို ယဉ်ကျေးမှုချောက်ကမ်းပါးကို တွန်းပို့နိုင်တဲ့ အစီအစဉ် မျိုးတွေ အများဆုံးပြသလာတယ်။ စင်ပေါ်မှာ ၀တ်ချင်တိုင်းဝတ် ကဲချင်တိုင်းကဲနေတာကို အောက်က ဒိုင်လူကြီး အနုပညာရှင်တွေက ညီလေးကကောင်းပါတယ်၊ ညီမလေးတို့က မဆိုးပါဘူး လုပ်နေတဲ့ အစီအစဉ်တွေများလာတယ်။ ရုပ်ရှင်၊ဗီဒီယိုပိုင်းမှာလဲ လန်းချင်တိုင်းလန်းနေကြတယ်။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ဗီဒီယိုကြေငြာက ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ မဟုတ်ရင်ခေတ်မမီတော့သလိုဖြစ်လာတယ်။
သရုပ်ဆောင်ပညာက အနုပညာလား? ရေကူးဝတ်စုံကအနုပညာလားလို့ မေးရမလိုဖြစ်နေပြီ။ အပြောင်းအလဲ တစ်ခုမှာ ဒီရလဒ်တွေကို အစကတည်းက ခန့်မှန်းပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် ရလဒ်တွေက အပေါင်းရလဒ်ထက် ဆုတ်ယုတ်မှုကပိုများနေတာတော့ တာဝန်ရှိသူတွေသိဖို့လိုမယ်။ ကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်လည်း အသိရှိဖို့လိုတယ်။ ကိုယ့်အစီအစဉ်၊ ကိုယ့်အနုပညာကို ကြည့်နေတဲ့ ပရိတ်သတ် အတွက် အားဆေးမဖြစ်ရင်တောင် အဆိပ်ခွက်တော့ မဖြစ်ကြစေချင်ဘူး။ အချိ်န်မီမပြင် ဆင်နိုင်ရင် မျိုးဆက်သစ်ညီငယ်ညီမငယ်တွေအတွက် အရမ်းအန္တရာယ်ကြီးတယ်။ အခုတောင် တစ်ချို့မှုခင်းသတင်းတွေမှာ လူငယ်ပိုင်းပြဿနာကြောင့် အရွယ်မတိုင်ခင် ဘ၀နွမ်းကြရသူတွေ အကြောင်း တော်တော်များများတွေ့လာရပြီ။”ဟု ၄င်းအမြင်ကို ပြောဆိုသွားပါတယ်